१२ जना स्टाफ नर्सको लागि ४३९ आवेदन, परीक्षाको डेढ महिनामा पनि नतिजा आएन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश १ ∕ १२ जना स्टाफ नर्सको लागि ४३९ आवेदन, परीक्षाको डेढ महिनामा पनि नतिजा आएन
१२ जना स्टाफ नर्सको लागि ४३९ आवेदन, परीक्षाको डेढ महिनामा पनि नतिजा आएन
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७७ फागुन ११ गते, १०:४१ मा प्रकाशित
विराटनगर—विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालले डेढ महिना अगाडि स्टाफ नर्स नियुक्त गर्न सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा निकाल्न आलटाल गरेको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्टाफ नर्सको दरबन्दी करार सेवामार्फत पदपूर्ति गर्न अस्पतालले २८ मंसिरमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।
अस्पतालले १२ जना स्टाफ नर्स माग गरेर २८ मंसिरमा सूचना निकालेपछि ४ सय ३९ जना प्रतियोगीहरुले आवेदन दिएका थिए । रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले अस्पतालले २५ पुसमा परीक्षा सञ्चालन गरेकोमा परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशन गरेको छैन ।
नतिजाको पर्खाइमा परीक्षार्थीहरु रहेको बेला परीक्षा नै खारेज गरी परीक्षार्थीसँग लिएको आवेदन शुल्क फिर्ता गर्नेतर्फ छलफल हुन थालेको छ । नतिजा प्रकाशन नभएपछि अस्पतालमा बुझ्न गएकी एक परीक्षार्थीले भनिन्, ‘रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर सोध्न आएकी थिएँ । रिजल्ट कहिले आउँछ भन्न सकिदैन, परीक्षा नै खारेज हुनसक्छ भन्ने जवाफ पाएँ ।’
अस्पतालमा धेरै समयदेखि रिक्त रहेको दरबन्दीमा ६ महिनाका लागि करार सेवामा स्टाफ नर्स भर्ना गर्न खोजिएको थियो । २५ पुसमा परीक्षा सञ्चालन भएपछि एक साताभित्रै रिजल्ट तयार भइसकेको थियो । ३ माघभित्रै परीक्षा समितिमा रिजल्टको शिलबन्दी प्राप्त भएको बताइएको छ । सबै तयारी पूरा भएपनि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले इच्छा नदेखाएकै कारण परीक्षाफल प्रकाशन हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले रिक्त दरबन्दीमा सरकारले कर्मचारी खटाएर पठाउन थालेपछि के गर्ने भन्ने दुविधा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल सरकारको दरबन्दी रिक्त रहेकोले सरकारले कर्मचारी पठाएपछि कसरी करारमा नियुक्त गर्ने भन्ने समस्या अस्पताललाई परेको उनको दावी छ । ‘नेपाल सरकारको दरबन्दी खाली थियो । करार सेवामार्फत पदपूर्ति गर्न सूचना निकाल्यौं । तर, अहिले दरबन्दीकै स्टाफहरु आइरहेका छन्,’ उनले भने ‘त्यही कारणले गर्दा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको हो । के गर्ने भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौं ।’
रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न अस्पतालले मेसु डा. चुमनलाल दास संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय परीक्षा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय देवा यादव र शिल्पा कार्की, मेट्रोन डा.मञ्जु यादव र डा.सुधीर श्रेष्ठ छन् । परीक्षाफल प्रकाशन गर्नका लागि पटक–पटक सदस्यहरुले बैठकको माग गरेपनि मेसु दासले बैठक बोलाकाए छैनन् ।
‘मेसुले नै इच्छा नगरेका कारण परीक्षा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन,’ एक सदस्यले भने, ‘बैठक बसौं भन्यो भने उहाँ तर्किनु हुन्छ र रिजल्ट निकाल्न कुनै चासो दिइरहनुभएको छैन । त्यसको कारण पनि हामीले बुझ्न पाएका छैनौं ।’